Hatramin'ny nakarako @kyleplacyand @edeckersboky 'Manome marika ny tenanao”Nanomboka naminavina fanindroany tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiko tamin'ny fiandohan'ny teknolojia fanombohana aho. Taona maro lasa izay, namorona persona iray nantsoina aho Addy. Izy io dia singa iray amin'ny rindrambaiko, fa mihoatra noho izany, izy no mpanompo mora vidy indrindra ho an'ny mpanjifanay. Ny tanjoko dia ny hampiarahan'ny olona amin'ny AddressTwo matanjaka kokoa noho ny ahy. Nandaitra izany. Ary androany, manomboka manontany tena aho: diso ve ny faniriako olon-kafa ho endrik'ilay orinasako — olona sandoka?
Andao atomboka amin'ny antony. Tsy fanandramana ara-tsosialy voaolana io. Tsy fomba fijery tsy mazava momba ny zava-misy teraka tamin'ny fahazazako tamin'ny filalaovana Legend of Zelda sy RPG's hafa (izay tsy nataoko, btw). Fihetsiketsehana kajy io. Hitanareo, vao avy sitrana tamin'ny raharaham-barotra teo aloha izay niarahan'ny rehetra niasa tamin'i Nick — tsy ny orinasa Nick, fa tsy ny mpiasan'i Nick, Nick fotsiny. Ary ho ahy, midika izany fa tsy nahazo fialantsasatra i Nick ary ny tena zava-dehibe dia tsy afaka nivarotra an'io orinasa io amina miliara maro i Nick ary nisotro ronono niaraka tamin'ny vady aman-janany Nick.
Addy dia noforonina ho Nick tsara kokoa. Tsy matory izy. Tsy manana fianakaviana manontany tena izy hoe maninona i Addy no mijery mailaka foana amin'ny alina. Tsy ho voan'ny homamiadan'ny sarakaty koa izy ary hamela ny asany amin'ny alahelo sy tampoka. Addy dia tsy hahazo fifanarahana tsara kokoa amin'ny fanombohana lehibe sy ny fandoavana ny vola miaraka amin'ny lisitry ny mpanjifanay. Tsy hampahatezitra ny olona ny fomba fijery ara-politika sy ara-pivavahana an'ny elatra havanana sy mpandala ny nentin-drazana izay tsy zakany mihitsy ny mandefa ny kaonty twitter an'ny orinasa. Addy mitsiky fotsiny ary manompo.
Fa andramo araky ny mety ataontsika fa tsy olona izy. Pinocchio dia tantara foronina. Ka iza aho? Creative? Sa mangatsiaka?
Amin'ny maha mpanjifa teknolojia ahy dia tsy afaka mieritreritra avatar orinasa hafa aho izay mahatsapa fifandraisana matanjaka. Tadidinao ilay taratasy papyr miaraka amin'ny maso sy vava nibontsina manodidina ny zoro MS Word 2003? Inona no mampatahotra. Tsy teo mihitsy izy rehefa nilaiko izy, fa kosa naharitra roa heny noho ny fandefasana ilay programa. Twitter dia nanao avatar iray ho fankahalana indrindra eo amin'ny tontolon'ny media sosialy: the Whale Whale. Matahotra aho fa raha mbola misy fahatapahana iray indray, vahoaka romain'ireo Kalifornia romana no hihaza ireo vongan-doha ho fongana.
Nisy nahavita soa ny zavatra namboarina Addy?
Rehefa mieritreritra orinasa teknolojia lehibe aho dia mieritreritra ireo olona ao aoriany: Steve Jobs, Bill Gates, Scott Dorsey, Chris Baggott, Scott Jones. Na eo aza izany dia tsy mitsaha-mitombo ny asan'i Addy. Izy no mampiantrano ny vaovao oniversite orinasa kely, mandefa ny taratasinay, ary mety tsy ho ela dia hisolo ahy ho ilay toetra ao ambadiky ny twitter @addresstwo twitter. Moa ve isika manosika lavitra mankamin'ny lavaka tsy hita noanoa, na mamelatra tany vaovao miaraka amina fialofana tsy misy fotony?
Tags: Avatarmarikafandraharahana madinika
Tokony ho ao amin'ny Twitter ve ny orinasanao?
Steve Jobs: fifantohana, fahitana, famolavolana
Dec 16, 2011 ao amin'ny 8: PM PM
Ny iray amin'ireo toerana hitako niasa tsara tamin'ny avatar dia ireo indostria izay tian'ny mpanjifa tsy hitonona anarana. Ny fanampiana ny trosa, ny olana ara-pananahana, ny fihenan-danja, sns. Dia faritra rehetra mety ahitan'ny mpanjifa somary mahazo aina eo imason'olona… na dia endrik'olombelona fotsiny aza. Raha vita tsara (toy ny avatar etsy ambony dia), mino aho fa mety ho matihanina sy manasa. Raha tsy mety dia mety manimba.
Ny vintana ho an'ny avatar dia mety hipoaka, na izany aza, rehefa lasa "zatra" mifandray amin'ny endri-tsoratra AI ny olona. Siri amin'ny iPhone dia ohatra iray, saingy misy rafi-telefaona mandroso ankehitriny izay feo mihetsika tanteraka amin'ny solosaina. Inoako fa, toa ny olona manantena ny hiresaka amin'ny olona amin'izao fotoana izao, dia lasa tsy mahazaka olona intsony izy ireo satria afaka miresaka amin'izy ireo amin-tsaina kokoa ireo tarehin-tsoratra ireo.
Lahatsoratra tsara - tena mampieritreritra anao! Misaotra Nick!